Israelfo sare so akwantu (1-49)
Wɔkyerɛɛ wɔn sɛnea wobedi Kaananfo so nkonim (50-56)
33 Eyi ne Israelfo akwantu ho nsɛm, bere a Mose ne Aaron dii ɔman no asraafo akuw+ anim fii Egypt asaase so+ no.+ 2 Baabi a wotu fii wɔ wɔn akwantu no mu biara, Mose yɛɛ ho kyerɛwtohɔ sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ no no. Mmeae a wotu fii ne mmeae a wɔkɔsoɛe ni:+ 3 Bosome a edi kan, bosome no da a ɛto so 15 no,+ wotu fii Ramese.+ Ɛda a wodii Twam no,+ ade kyee ara na Israelfo de akokoduru* fii Egyptfo no nyinaa anim kɔe. 4 Saa bere yi nyinaa, na Egyptfo resie wɔn mmakan a Yehowa kunkum wɔn wɔ wɔn mu no nyinaa,+ efisɛ na Yehowa abu wɔn anyame no atɛn.+ 5 Enti Israelfo tu fii Ramese, na wɔkɔsoɛɛ Sukot.+ 6 Na wotu fii Sukot, na wɔkɔsoɛɛ Etarm+ a ɛwɔ sare no ano no. 7 Bere a wotu fii Etarm no, wɔsan wɔn akyi, na wɔde wɔn ani kyerɛɛ Pihahirot a ɛne Baal-Sefon di nhwɛanim no,+ na wɔkɔsoɛɛ Migdol anim.+ 8 Ɛno akyi no, wotu fii Pihahirot, na wɔkɔfaa ɛpo no mfinimfini+ kɔɔ sare so,+ na wɔde nnansa twaa kwan faa Etarm sare so,+ na wɔkɔsoɛɛ Mara.+ 9 Afei wotu fii Mara, na wokoduu Elim. Ná asuti 12 ne mmedua 70 wɔ Elim, enti wɔsoɛɛ hɔ.+ 10 Ɛno akyi no, wotu fii Elim, na wɔkɔsoɛɛ Ɛpo Kɔkɔɔ no ho. 11 Afei wotu fii Ɛpo Kɔkɔɔ no ho, na wɔkɔsoɛɛ Sin sare so.+ 12 Bere a wotu fii Sin sare so no, wɔkɔsoɛɛ Dofka. 13 Akyiri yi, wotu fii Dofka, na wɔkɔsoɛɛ Alus. 14 Ɛno akyi no, wotu fii Alus, na wɔkɔsoɛɛ Refidim.+ Nanso na nsu biara nni hɔ a nnipa no bɛnom. 15 Afei wotu fii Refidim, na wɔkɔsoɛɛ Sinai sare so.+ 16 Na wotu fii Sinai sare so, na wɔkɔsoɛɛ Kibrot-Hatawa.+ 17 Bere a wotu fii Kibrot-Hatawa no, wɔkɔsoɛɛ Haserot.+ 18 Afei wotu fii Haserot, na wɔkɔsoɛɛ Ritma. 19 Ɛno akyi no, wotu fii Ritma, na wɔkɔsoɛɛ Rimon-Peres. 20 Bere a wotu fii Rimon-Peres no, wɔkɔsoɛɛ Libna. 21 Na wotu fii Libna, na wɔkɔsoɛɛ Risa. 22 Ɛno akyi no, wotu fii Risa, na wɔkɔsoɛɛ Kehelata. 23 Bere a wotu fii Kehelata no, wɔkɔsoɛɛ Sefa Bepɔw so. 24 Afei wotu fii Sefa Bepɔw so, na wɔkɔsoɛɛ Harada. 25 Bere a wotu fii Harada no, wɔkɔsoɛɛ Makelot. 26 Ɛno akyi no, wotu+ fii Makelot, na wɔkɔsoɛɛ Tahat. 27 Afei wotu fii Tahat, na wɔkɔsoɛɛ Tera. 28 Bere a wotu fii Tera no, wɔkɔsoɛɛ Mitka. 29 Akyiri yi, wotu fii Mitka, na wɔkɔsoɛɛ Hasmona. 30 Ɛno akyi no, wotu fii Hasmona, na wɔkɔsoɛɛ Moserot. 31 Bere a wotu fii Moserot no, wɔkɔsoɛɛ Bene-Yaakan.+ 32 Na wotu fii Bene-Yaakan, na wɔkɔsoɛɛ Hor-Hagidgad. 33 Ɛno akyi no, wotu fii Hor-Hagidgad, na wɔkɔsoɛɛ Yotbata.+ 34 Akyiri yi, wotu fii Yotbata, na wɔkɔsoɛɛ Abrona. 35 Bere a wotu fii Abrona no, wɔkɔsoɛɛ Esion-Geber.+ 36 Afei wotu fii Esion-Geber, na wɔkɔsoɛɛ Sina sare so,+ kyerɛ sɛ, Kades. 37 Akyiri yi, wotu fii Kades, na wɔkɔsoɛɛ Hor Bepɔw so+ wɔ Edom asaase no hye so. 38 Na ɔsɔfo Aaron foro kɔɔ Hor Bepɔw so, sɛnea Yehowa kae no, na owui wɔ hɔ. Eyi yɛ bere a Israelfo fii Egypt asaase so no afe a ɛto so 40, bosome a ɛto so anum, bosome no da a edi kan.+ 39 Bere a Aaron wui wɔ Hor Bepɔw so no, na wadi mfe 123. 40 Saa bere no, Arad hene+ a ɔyɛ Kaananni a na ɔte Negeb wɔ Kaanan asaase so no tee sɛ Israelfo no reba. 41 Bere bi akyi no, wotu fii Hor Bepɔw so,+ na wɔkɔsoɛɛ Salmona. 42 Afei wotu fii Salmona, na wɔkɔsoɛɛ Punon. 43 Ɛno akyi no, wotu fii Punon, na wɔkɔsoɛɛ Obot.+ 44 Bere a wotu fii Obot no, wɔkɔsoɛɛ Ye-Abarim wɔ Moab hye so.+ 45 Akyiri yi, wotu fii Ayim, na wɔkɔsoɛɛ Dibon-Gad.+ 46 Afei wotu fii Dibon-Gad, na wɔkɔsoɛɛ Almon-Diblataim. 47 Bere a wotu fii Almon-Diblataim no, wɔkɔsoɛɛ Abarim mmepɔw so+ wɔ Nebo anim.+ 48 Ne korakora no, wotu fii Abarim mmepɔw so, na wɔkɔsoɛɛ Moab sare so, baabi a ɛbɛn Yordan wɔ Yeriko no.+ 49 Na wɔkɔɔ so tenaa Yordan ho, efi Bet-Yesimot kosi Abel-Sitim+ tɔnn wɔ Moab sare so. 50 Na Yehowa ne Mose kasae wɔ Moab sare so, baabi a ɛbɛn Yordan wɔ Yeriko no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: 51 “Wo ne Israelfo nkasa, na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Morebetwa Yordan akɔ Kaanan asaase so.+ 52 Mompam nnipa a wɔtete asaase no so nyinaa mfi mo anim, na monsɛe wɔn abo ahoni nyinaa,+ ne wɔn dade ahoni* nyinaa,+ na monsɛe wɔn sorɔnsorɔmmea* nyinaa.+ 53 Momfa asaase no na montena so, efisɛ sɛnea ɛte biara mede bɛma mo sɛ mo agyapade.+ 54 Mommɔ ntonto+ nkyɛ asaase no mma mo mmusua no sɛ wɔn agyapade. Kuw a emufo dɔɔso no, ma wɔn agyapade nyɛ kɛse, na kuw a emufo sua no, tew wɔn agyapade so.+ Baabi a obiara ntonto bɛkyerɛ no, ɛhɔ na ɛbɛyɛ n’agyapade. Mo nsa bɛka mo agyapade sɛnea mo agyanom mmusuakuw te.+ 55 “‘Na sɛ moampam wɔn a wɔtete asaase no so amfi mo anim a,+ ɛnde wɔn a mobɛma wɔaka no bɛyɛ sɛ biribi a atɔ mo ani ne nsɔe a ɛhyɛ mo mfe mu, na wɔbɛteetee mo wɔ asaase a mobɛtena so no so.+ 56 Na nea mayɛ sɛ mede bɛyɛ wɔn no, mo na mede bɛyɛ mo.’”+